I-STUDIO SENTABA - ubhavu wangaphandle & lokho kubukeka! - I-Airbnb
I-STUDIO SENTABA - ubhavu wangaphandle & lokho kubukeka!
Methven, Canterbury, i-New Zealand
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Rona
U-Rona Ungumbungazi ovelele
MountainThymeStudio ingaphezu nje indawo yokulala, futhi asikwazi ukulinda ukuba uzibeke kuleyo mbono emangalisa! Umbhede King-size, amalineni izinga, 42" smart TV nge Netflix, usofa ethokomele, ensuite kanye kitchenette nge efrijini, iketela futhi itolitji. Barbecue. Gorgeous yangasese ezijulile ezimbili umuntu yokugeza ongaphandle (hhayi ubhavu ashisayo) nge umbono ngqo kuze kufike Mount Hutt - sheer romance. SICELA UQAPHELE: I-studio sinekamelo lesibili elinesitayela esingasese elingatholakala uma uhamba nomunye umbhangqwana. Hlola indlu ehlukile ukuze uthole izithombe, imininingwane nokubhukha.
5.0 · 103 okushiwo abanye
Indawo yethu iyingxenye yesehlukaniso esisha sasemaphandleni esibizwa ngokuthi i-Tymestream emngceleni wedolobha. Zonke izigaba ziyi-acre eyodwa futhi sasiyindlu yokuqala ukwakhiwa lapha. I-Methven yindawo enhle ye-Wee ebizwa nangokuthi i-Mount Hutt Village, eqhayisa ngensimu enhle kakhulu yeqhwa e-New Zealand. Imizila yethu yokugibela izintaba iyingqayizivele, futhi singabantu abahamba ngezintaba. Engeza kulelo jet isikebhe emangalisa, okuthakazelisayo entsha Opuke hot-pool eziyinkimbinkimbi, futhi eziningi zokudlela, cutest ezimele cinema, futhi enhle endala Kiwi pubs.... indawo enkulu wee ukuhlala isikhashana.
Ngaphandle uma usitshela ngenye indlela, sicabanga ukuthi uyayithanda imfihlo yakho - futhi uzoyithola! Nokho, sishayela ucingo nje uma unemibuzo, sidinga ukuboleka noma yini, noma sicabange nje ingxoxo.
URona Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Methven namaphethelo